Xaaska Feeryahanka Tyson Fury Oo Qarisay Ilmaheedii Oo Dhintay Saacado Ka Hor Feer Taariikhi Ah Oo Fury Ku Guuleystay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(11-12-2018) Xaaska feedhyahanka Ingiriiska ee Tyson Fury oo lagu magacaabo Paris ayaa calool adag iyo adkaysi muujisay saacado ka hor intii aanu saygeeda Fury dhex istaagin garoon uu ku feedhtamayey bishii June ee sannadkan, xilligaas oo lagu wargeliyey inuu geeriyooday canugoodii.
Paris oo ay da’deedu tahay 28 jir ayaa daboolka ka qaadday arrin fajac iyo yaab ku keentay dhamaan dadkii maqlay, taas oo ah inay qarisay canugeedii oo dhintay, sabab la xidhiidha guul ay la doonaysay saygeeda Tyson Furry.
Paris ayaa ogaatay in ilmo ay ku sidday caloosha oo uu geeriyooday, waxaanay dareentay qalbi jab iyo werwer, laakiin waxay murugadeeda ku koobtay nafteeda oo kaliya, iyadoo aan u sheegin Fury oo xilligaas isku diyaarinayey ciyaar feedh ahayd oo uu guul weyn kasoo gaadhay oo uu la yeeshay Sefer Seferi oo u dhashay waddanka Albania bishii June ee sannadkan sii dhamaanaya.
Paris waxay sheegtay in haddii ay warkan murugada leh u sheegi lahayd Fury ay dhici lahayd guul-darro kasoo gaadhi lahayd ciyaarta feedhka oo uu geli lahaa isagoo murugaysan, taas daraadeedna ay go’aansatay in xanuunku kalideed ku ekaado.
“Waxa aan lahaa uur siddeed toddobaad ah. Isla maalintii feedhka ayaan ogaaday in uu dhintay ilmihii caloosha ku jiray.” Ayay tidhi Paris oo hadda uun kasoo kabatay qalbi jabka iyo murugo ay ka qaadday xanuunka ay kaligeed isku koobtay iyo geerida ilmaha ay ka qarisay aabbihii.
“Umaan sheegin ka hor intii aanu tegin xayndaabka feedhka. Maalintii xigtay ayaan u sheegay kaddibna isku raacnay cusbitaalka loogu xaqiijiyey.” Ayey ku daray.
Fury iyo Paris waxay hore u haysteen afar carruur ah ka hor ilmaha ku dhintay caloosha, laakiin war farxad leh ayay heleen shan toddobaad kaddib murugadii ay galeen.
“Shan toddobaad kaddib (xilligii uu dhintay ilmaha caloosha ku jiray) mar kale ayaan uur yeeshay, waxaananu filaynaa inuu noqdo wiil dhalan doona bisha March. Laakiin weli waxa aanu la qalbi jabsanahay canuga aanu weynay.”
Tyson Fury waxa uu toddobaadkii hore la ciyaaray Deontay Wilder oo si layaab leh ay barbar-dhac ugu soo galeen feedh ka dhacay dalka Maraykanka, waxaana la filayaa inay mar kale isku noqon doonaan si midkood u guuleysto.